Bertin Nahum, onye mepụtara ụzụ robot ezubere inyere ndị neurosurgeons aka - Afrikhepri Fondation
Bertin Nahum, onye mepụtara rọbọt bu n’obi inyere ndị na-agwọ ọrịa ahụ aka
Bertin Nahum azụlitewo robot a na-akpọ Rosa ™ nke na-enyere ndị dọkịta na-awa ahụ aka n'ịwa ahụ ụbụrụ. O kere ụlọ ọrụ ya (Medtech SAS) nke na-echepụta ígwè ọrụ ịwa ahụ na 2002. N’uche ya, robot bụ otu n’ime ụzọ kachasị mma iji nyere ndị dọkịta na-awa ahụ aka ịrụ ọrụ ha nke ọma na nke ọma. Ọ gụsịrị akwụkwọ na National Institute of Applied Sciences (INSA Lyon, France) ma nwee onye ọkà mmụta sayensị na robotik na Mahadum Coventry (England).
Tupu ya kee Medtech, Bertin Nahum rụrụ ọrụ afọ iri maka nnukwu ụlọ ọrụ ebe ọ mepụtara mgbatị enyemaka robotic maka ịwa ahụ.
Bertin Nahum bu ụzọ mepụta rọbọt akpọrọ BRIGIT ™ nke na-enyere ndị dọkịta aka n'ịwa ahụ ịkpụkpụ site n'inye ha nkwado iji mepụta ọkpụkpụ nwere ogwe aka nke na-eduzi dọkịta na-awa ahụ ma na-enyere ya aka ịkpụ. Zimmer Inc, onye ndu ụwa na ịwa ahụ ịkpụkpụ, zụtara patents si Medtech na 2006.
Na 2010 o kere Rosa ™, a robot na a robotic ogwe aka nke nwere ike inyere dọkịta na-awa ịrụ siri arụmọrụ na ụbụrụ. Onye na-eme enyi na onye ezi omume, ROSA ™ na-ejizi n'ụlọ ọgwụ na gburugburu ụwa maka ịwa ahụ ụbụrụ.
Site na ROSA ™, Bertin Nahum bụ onye nke anọ họọrọ nke kacha elu azụmaahịa ọgbara ọhụrụ na Discovery Series na 4.
Atiya NDỊ BỤRỤ NTỤRỤ NA NDỊ ỌZỌ